Ciidammada Booliska Somaliland oo Waaran Maxkamadeed la raadinaya Murashaxiin Komishanku ansixiyey | Somaliland Post
Home News Ciidammada Booliska Somaliland oo Waaran Maxkamadeed la raadinaya Murashaxiin Komishanku ansixiyey
Ciidammada Booliska Somaliland oo Waaran Maxkamadeed la raadinaya Murashaxiin Komishanku ansixiyey
Hargeysa (SLpost)- Ciidammada Booliska Somaliland, ayaa shaaciyey Magacyada Laba Musharrax oo ka sharraxan Xisbiyada WADDANI iyo UCID, kuwaasi oo lagu eedeeyay in markii ay isa soo sharraxayeen adeegsadeen shahaadooyin been abuur ah.
War Qoraal ah oo ka soo baxay Ciidammada Booliska Shalay, ayaa lagu sheegay in Ciidammadu ay Bulshada u caddaynayaan inay ku raad-joogaan laba Musharrax oo Magacyadoodu kala yihiin Kubrra Xasan Maxamuud oo Gobolka Togdheer uga sharraxan Xisbiga WADDANI iyo Canab Cabdi Aw Xirsi oo Xisbiga UCID uga sharraxan Gobolka Sool.
Sidoo kale, Warka Booliska ayaa lagu sheegay in Maxkamad la soo taagi doono labada Musharraxa ee Dumarka ah iyo Musharrax kale oo Magaciisu yahay Qaasim, kaasi oo ku xidhan Saldhigga dhexe ee Magaalada Hargeysa, kaasi oo laftiisa lagu eedeeyay inuu shahaado been-abuur ah u isticmaalay Sharciyeynta Musharraxnimadiisa.
Warka qoraalka ah ee Ciidammada Booliska Somaliland oo dhamaystiran ayaa u qornaa sidan “Ciidamadda Booliska Jamhuuriyada Somaliland Waxay Bulshadda u caddaynayaan arrimahan hoos ku qoran:- waxaa ka soo baxay Tartamayaasha Doorashada u taagan qaarkood fal-danbiyeedyo iyo Eedo Booliska soo gaadhay Afartankii maalmood ee u dambeeyay, waxaana Eedahaas ka mid ah; In Murashixiinta qaarkood ay sitaan Shahaadooyin Foojari ah oo ay u samaysteen sifo sharciga baal marsan iyo arrimo kale, Taasi oo markii uu Boolisku baadhis qoto-dheer ku sameeyay ay u cadaatay in Sharciga lagu gefay oo ay dembiyo dhaceen foojirina ay sameeyeen xubnaha eedaysanayaasha ahi sida ku cad qodobada sharciga ah ee kala ah 371,373,iyo 375 Ee Xeerka Ciqaabta Guud.
Baadhista uu Boolisku imika gacanta ku hayaa waxay la xidhiidhaa Fal-dambiyeedyo Foojari ah oo ay ku kaceen qaar ka mid Tartamayaasha qaarkood ee u sharraxan Doorashada Golaha Wakiilada iyo Golayaasha Deegaanka ee Dalka ka dhici doonta 31 May 2021.”